Nanoratra hira momba ny herisetran’ny polisy ilay mpanao politika sady mpanakanto Ongadey nandritra ny fanagadrana azy tamin’ny trano ambenana · Global Voices teny Malagasy
"olompirenena tsotra ianao nialoha ny nahapolisy anao."
Voadika ny 08 Mey 2019 5:53 GMT
Pikantsary tamin'ny lahatsary mozika Ofisialy tamin'ny hiran'i Bobi Wine ‘Afande’ tao amin'ny Youtube.
Tsy fety ho an'ilay mpikambana Ongadey ao amin'ny parlemanta, mpiangaly mozika sady mpikatroka Robert Kyagulanyi, malaza antsoina hoe Bobi Wine ny fetin'ny faran'ny herinandro Paska.
Neken'ny polisy ny fampisehoana amoron-dranomasina fanaony isan-taona isaky ny Alatsinain'ny Paska, izay atao ao amin'ny One Love Beach Busaabala, 12 kilometatra avy ao Kampala, renivohitra saingy avy eo nofoanan'ny polisy 2 andro talohan'ny fampisehoana.
Nambenan'ny polisy ny arabe ary noraràna ho an'ny rehetra ny fidirana ao amin'ny toerana, anisan'izany ny Bobi Wine, ilay tompony.
Vao maraimben'ny Alatsinainin'ny Paska 22 Aprily 2019, nosamborina i Bobi Wine raha nanatona ny toerana kasaina hanaovana valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mba hanome ny heviny mikasika ny antony nanafoanan'ny polisy ny fampisehoany.
Nopotehan'ny polisy ny varavarankelin'ny fiarany ary nampiasa tifitra ranon-tsakay ny pollisy mba hamoahana azy hiala ny fiara rehefa nanitrikitrika i Bobi Wine fa tsy nandika lalàna izy.
Ny lahatsary eto ambany dia mampiseho ny polisy misambotra an'i Bobi Wine rehefa niditra an-keriny tao amin'ny fiarany rehefa nanatona ny moron-dranomasina hanaovana valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izy. Naparitaky ry zareo ihany koa ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fampiasana tifi-drano sy baomba mandatsa-dranomaso:
Ny taratasy navoakan'ny polisy manasongadina ny antony nanafoanan'izy ireo ny fampisehoana dia milaza fa tsy nanaraka ny toro-làlana nomen'ny Polisy Ogandey i Bobi Wine tany aloha ka tsy afaka miantoka ny fiarovana ampy ho an'ireo mpifety sy ny mponina mipetraka akaikin'ny tranony amoron-dranomasina
Ampahany amin'ny taratasin'ny polisy nanafoana ny fampisehoana nozaraina tao amin'ny pejy Facebook ofisialin'i Bobi Wine.
Taorian'ny fisamborana, nogadraina tamin'ny trano ambenana i Bobi Wine, ary nandritra izany fotoana izany dia namorona hira tamin'ny fiteny maro momba ny herisetran'ny polisy izy.
Tao amin'ny trano lasa studio tsizarizary, nanoratra tononkira momba ny tokony hiadiana ho amin'ny fikarakarana tsara kokoa avy amin'ny polisy izy, izay lazainy fa nandray azy tamin'ny fomba feno herisetra sy tsy ara-drariny. Nanasongadina ny iray amin'ireo teny malazan'i Bobi Wine ihany koa ilay hira, “Tsy miady aminareo aho, miady ho anareo aho.”
Nampiasaiko tamin'ny famoronan-kira ny fihazonana ahy tamin'ny trano ambenana nandritra ny roa andro ka atolotro ho an'ireo lehilahy sy ny vehivavy polisy izany. Mankasitraka izahay amin'ny sorona ataon'izy ireo hiantohana ny fiarovana ny firenentsika ary miangavy azy ireo izahay hampitsahatra ny fanitsakitsahana ny zon'ny olom-pirenena.
Ity ambany ity ny lahatsarin'ny hira Afro Beat “Afande” amin'ny teny Swahili midika hoe manamboninahitra. Ahitana tapatapatsary maromaro mampiseho ny herisetran'ny polisy ny lahatsary ary koa sary noraketina tao amin'ny tranony izay niambenana azy. Efa nisy nijery in-299 000 hatramin'ny fotoana nanoratana ny teny anglisy ny lahatsary tao anatin'ny efatra andro ary nitana ny laharana 1 ao amin'ny Youtube any Oganda:
Manomboka amin'ireto tononkira amin'ny teny Anglisy ireto ilay hira:
Nandritra ny telo taona farany, fampisehoana 124 manasongadina an'i Bobi Wine no nofoanana ary notononina ny tsy fahafenoan'ny fepetra ary indraindray tsy fananana fahazoan-dalan'ny polisy.
Tamin'ny herintaona, nofoanana imbetsaka ny fampisehoana irery an'i Bobi Wine talohan'ny nanovàny ny toerana Kianja nasionalin'ny Namboole, mahazaka olona 60.000 ho lasa any amin'ny tranony One Love Beach Busaabala, izay mahazaka olona eo amin'ny 30.000. Tamin'ny fampisehoana tamin'ny taona 2018, niresaka momba ny politika i Bobi Wine – lohahevitra iray izay nangatahan'ny polisy mba tsy horesahana mandritra ny fampisehoana hira.
Mpisera Twitter Ogandey Stotrixbaxx mihevitra fa tsy manana fialantsiny intsony ny polisy amin'ny ezaka ataon'izy ireo hanafoana ny fampisehoann'i Bobi Wine:
Tian'ny polisy hino isika fa ilay Bobi Wine izay nanaraka ny toro-làlana farany teo nandritra ny fampisehoana Kyarenga tao Busabala dia nandà tsy hanaraka ireo torolalana mitovy amin'izany ihany amin'izao fotoana izao.
Mpanao gazetin'ny NTV Ogandà sady mpikatroka Joel Ssenyonyi kosa manontany tena ny amin'ny antony nanaparitahana polisy marobe mba hanajanonana ny fampisehoan'i Bobi Wine kanefa tsy afaka mampiasa polisy marobe tahaka izany koa mba hanomezana fiarovana mandritra ny fampisehoana.
Mijery ny habetsaky ny Polisy sy ny Tafika tao One Love Beach Busabala aho ary manontany tena hoe maninona izy ireo no tsy nampiasa izany ho fiarovana ny fampisehoana, raha jerena ny filazan'ny polisy fa nofoanan'izy ireo ny fampisehoana satria tsy nanome fiarovana ampy ho an'ireo mpanatrika ny fampisehoana i Bobi Wine!
Volavolan-dalàna vaovao hifehezana ny fanehoan-kevitra ara-java-kanto
Misy ny volavolan-dalàna vaovao miezaka hifehy ny asan'ny indostrian'ny mozika ao Oganda amin'ny fangatahana amin'ireo mpanakanto rehetra mba hisoratra anarana amin'ny fanjakana ary mangataka fahazoan-dàlana rehefa hanao fampisehoana any ivelan'ny firenena.
Amin'ny maha-politisiana mpanohitra azy, nampiasa ny anjara asany amin'ny maha-mpanakanto i Bobi Wine mba hampiroborobo ny hafatra momba ny fandriampahalemana, ny firaisankina ary ny fanovana, izay mifantoka manokana amin'ny hetra tsy ara-drariny amin'ny media sosialy nampidirina tamin'ny heritaona.
Ity volavolan-dalàna ity dia mety midika fa afaka mifehy ny fampisehoan'i Bobi Wine any ivelan'i Oganda ny governemanta, miafara amin'ny fanimbana ny asany amin'ny mozika – ary mampihena ny fiantraikany ara-tsosialy.
Vakio bebe kokoa: #FreeBobiWine: Mihamafy ny fihetsiketsehana manohitra ny fampijaliana sy ny fisamborana tanora ara-politika ao Oganda
Watchdog Oganda namintina ny ao anatin'ilay volavolan-dalàna, miaraka amin'ny songadina vitsivitsy etsy ambany:
1. Ny mpanakanto rehetra dia mila fahazoan-dàlana hiasa any Oganda.
2. Tsy ara-dalàna ny manao fialamboly ampahibemaso rehefa tsy manana fahazoan-dalana avy amin'ny Minisiteran'ny Asa.
3. Tsy misy mpanakanto mahazo manao fampisehoana any ivelany raha tsy mahazo alalana avy amin'ny ministera.
4.Ny mpanakanto rehetra manao fampisehoana any ivelany tsy misy fahazoan-dàlana dia tsy azo ekena ho mpanakanto mandritra ny herintaona.
5. Hisy ny birao hisahana ny sivana mba hanivana votoaty ara-pialam-boly ary hiantoka ny fifehezana eo amin'ireo mpanakanto.
Tamin'ny taona 2013, lany lalàna ny volavolan-dalàna Public Order Management ary nanome fahefana ny inspektera jeneralin'ny polisy (IGP) mba hifehy ny famoriam-bahoaka, ny fihetsiketsehana sy ny filaharana.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, manonona ity lalàna iray ity ihany ny mpitandro filaminana mba hampitsaharana ireo fivoriana ara-politika.
Milaza ny mpanohitra fa tsy mamaly ny fangatahan'izy ireo hanao fihetsiketsehana milamina ny IGP ary izany no antony mahatonga ireo fihetsiketsehana marobe korontanina amin'ny fampiasana baomba mandatsa-dranomaso, bala sy daroka ataon'ny polisy mitam-piadiana.
Mpitarika mpanohitra maro, anisan'izany i Bobi Wine no efa nigadra noho ny fanaovana fihetsiketsehana tsy nahazo ny fankatoavan'ny IGP.
Inona indray no nahazo an'i Boni Wine manaraka?
Tamin'ny 29 Aprily, herinandro taorian'ny nisamborana azy tany an-tranony, niezaka nankany amin'ny sampan-draharahan'ny fanadihadiana heloka bevava hanao fanambarana momba ny fampisehoana ny Paska i Bobi Wine, saingy nosamborin'ny polisy indray izy.
Nampiakarin'ny polisy tany amin'ny fitsarana i Bobi Wine noho ny fanaovana fihetsiketsehana tsy ara-dalàna manohitra ny Hetra amin'ny haino aman-jery sosialy tamin'ny taona 2018.
Vakio bebe kokoa: Mitsangana ny mpanakanto satria voampanga indray ho mpamadika ilay solombavambahoaka Ongadey ‘Bobi Wine’
Nogadraina vonjimaika tany amin'ny fonjan'i Luzira izy nanomboka teo rehefa tsy nomen'ny polisy fahafahana vonjimaika, taorian'ny fihetsiketsehana maromaro manerana an'i Kampala noho ny fisamborana azy.
Ny 2 May 2019, nomena fahafahana vonjimaika izy taorian'ny fotoam-pitsarana mivantana tamin'ny teleconference teo amin'i Bobi Wine tany am-ponja sy ny fitsarana ao Kampala.
Azia Afovoany sy Kaokazy 19 ora izay